Vaovao - Ny fiantraikan'ny Covid 19 amin'ny tatitra momba ny tsenan'ny milina mitsivalana-Global Industry Report 2030
Ny areti-mandoza COVID-19 (coronavirus) dia nampiakatra avo roa heny ny fangatahana famolavolana jiro, fonosana malefaka ary milina fisotro. Rehefa mangataka kojakoja ilaina toy ny savony, otrikaina ary vokatra fanadiovana hafa ny mpanjifa dia nirongatra ny fangatahana milina famolahana «blow mold» isan-karazany toy ny tsindrona tsindrona sy fitrandrahana. Ny fangatahana fanadiovana sy famonoana otrikaretina mbola tsy nisy toy izany dia namorona fotoana mety ho an'ireo orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina famolavolana mba hahazoana lanja. Rehefa mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny fitokanan-tena ny olona iray dia mitombo ihany koa ny fangatahana zava-pisotro toa ny ranom-boankazo sy rano ary labiera.
Rehefa mahavita haingana ny lisitra fitadiavany ny olona dia ho be mpitady ihany koa ny milina famolavolana tsindrona ampiasaina hamokarana boaty. Sidel, mpanamboatra ny rafitra famolavolana famafazana, dia nanova ny ivon-toerany manandanja ho lasa toeram-pamokarana ho an'ny tavoahangin-dranomaso manadio tanana PET (polyethylene terephthalate). Noho izany, ny tsenan'ny milina famolavolana kapoka dia antenaina hijerena fitomboana lehibe mandritra ny vanim-potoana mialoha.
Ny fanavaozana ny milina famolavolana tsofina mihombo no miha-mahazatra. Nahasarika ny sain'ny mpampiasa vola ireo masinina ireo satria ireo rafitra ireo dia mahavita mamokatra tavoahangy manana kalitao avo lenta ho an'ny fikarakarana sakafo, fonosana ary fitaterana. Ny tsenan'ny milina famolahana dia antenaina ho matotra amin'ny fanatsarana ny fahitsiana sy ny hafainganan'ny rafitra ary hahatratra 65,1 miliara dolara amerikana amin'ny 2030. Tian'ireo mpanamboatra plastika ny malefaka sy ny hamerenan'ny milina famolavolana. Ny teknolojia revolisionera ao amin'ny masinina dia miteraka fotoana bebe kokoa ho an'ireo orinasa amin'ny indostrian'ny fiara, zava-pisotro, fitsaboana, ary kosmetika.
Ao amin'ny tsenan'ny milina famolahana, ny fisehoan-kazo lehibe indrindra dia nanintona ny fihetseham-pon'ireo mpampiasa vola. Orinasa mpamokatra milina kanadiana Pet All Manufacturing Inc. dia manamboatra milina haingam-pandeha haingam-pandeha hainganana mba hiantohana ny fiovan'ny bobongolo haingana nefa tsy mila fitaovana. Noho izany, ireo mpanamboatra plastika dia nahatsapa ny fahombiazan'ny vidiny sy ny fiasa haingam-pandeha ho an'ireo milina fanotofana mandroso.
Milina famolavolana tsofina dia natao hanomezana fahafaham-po ny filan'ny zava-pisotro misy alikaola sy tsy zava-pisotro. Na izany aza, ho an'ireo mpanamboatra plastika, ny fihazonana ny faharetan'ny rivotra voafehy dia mety ho fanamby. Noho izany, ny orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina famolavolana blow dia manampy rafitra ambany sy avo lenta ary tsy misy fiatraikany amin'ny fizotry hafa. Raha mivoatra haingana ny fampiharana PET blow moulding dia mampitombo ny fahaizany R&D ny mpamokatra mba hampivelatra ny milina famolavolana mandroso.
Ny orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina famolavolana dia mamolavola rafitra izay mifanaraka tsara amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny rivotra, izay miantoka ny famerenana ny rivotra hiverina amin'ny rafitra tsindry ambany amin'ilay zavamaniry. Ny tanky fitahirizana rivotra eo an-toerana sy ny singa pneumatika azo refesina mifanaraka amin'izany dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fitontongan'ny tsindry amin'ny alàlan'ny famolavolana PET. Ny mpanamboatra milina dia tsy maintsy manatona ireo manam-pahaizana hamantatra sy handrefesana ny fihenan'ny tsindry ao amin'ny milina famolavolana.
Mifanaraka amin'ny marika hafa? Mangataha tatitra namboarina momba ny tsenan'ny milina famolavolana
Ny tsenan'ny milina famolavolana kapoka dia miatrika fiovana, fampidirana teknolojia vaovao mitsoka rivotra vaovao sy ara-toekarena. Ohatra, ny mpamatsy vahaolana teknolojia famolavolana W.MÜLLER GmbH dia manolo-tena handresy ireo kaontenera bobongolo miaraka amina teknolojia misy sosona telo. Ny sosona manify manify miaraka amin'ny fotony dia manome antoka ny hamafin'ny fitoeran-javatra ary manampy amin'ny fampihenana ny lanjany.
Ny teknolojia fandrosoana fandrosoana mandroso dia manala ny filàn'ny mpitsoka mitsoka simika. Ao amin'ireo mpitsoka mpitsoka simika, ny sosona afovoan'ny kaontenera dia alefa amin'ny azota amin'ny dingana ara-batana. Ity teknolojia ity dia fambara tsara ho an'ny orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina famolavolana, satria ity teknolojia tia tontolo iainana ity dia mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fonosana sakafo ankehitriny. Ny tavoahangy sombin-javatra dia mitaky fotoana kely kokoa sy fotoana fitsofana, izay manampy amin'ny fanamarinana ny fahaiza-mandanjalanja ara-toekarena amin'ny fitaovana.
Ny milina famolahana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra dia miteraka fahafaha-manao asa ho an'ny orinasa. Parker Plastika Machining Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina ny vahaolana turnkey ho an'ny milina famolavolana fako ao Taiwan. Mampiroborobo ny milina famolavolana herinaratra rehetra eny an-tsena izy ary malaza amin'ny rafitra fitsitsiana angovo avo lenta. Raha ampitahaina amin'ny tsindry hydraulic mahazatra, ny orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina fanenomana dia mampitombo ny fahafaha-mamokatra hanamboarana rafitra herinaratra mahery vaika ambany.
Ny milina famolavolana herinaratra rehetra misy vidiny ambany fikojakojana no safidy voalohany amin'ny mpanamboatra plastika satria ireo rafitra ireo dia tsy miteraka fandotoana solika. Ireo orinasa ao amin'ny tsenan'ny milina famolavolana tsofina dia mifantoka amin'ny rafitra elektrika rehetra. Ireo rafitra ireo dia tsy hiteraka fiparitahan'ny solika ary hitsitsy ny vidin'ny fikolokoloana ho an'ireo mpanamboatra plastika.
Ny fametrahana ny fanavaozana amin'ny milina famolavolana tohotra dia mila traikefa amin'ny injeniera an-taonany maro. Tech-Long Inc.-mpanamboatra asiana masinina fonosana zava-pisotro, miaraka amina orinasa matanjaka any Etazonia sy Eoropa, ary manavao ny milina famolavolana azy, izay afaka mamokatra tavoahangy fisaka ho an'ny fisotroana zava-pisotro sy tsy fisotroana ary fitoeram-be. Ireo orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina famolavolana tsofina dia mamolavola rafitra hamokarana tavoahangy asymmetrika mifototra amin'ny haitao fanafanana laharam-pahamehana.
Etsy ankilany, ireo orinasa eo amin'ny tsenan'ny milina famolavolana kapoka dia manatsara ny fahafahany mamorona rafitra hybrid. Manokana izy ireo amin'ny milina izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny polyethylene, polyethylene terephthalate ary polyvinyl chloride. Ireo mpanamboatra fitaovana dia mitrandraka fotoana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny famolavolana rafitra izay mamokatra fiara mifono solika, kaontenera misy fihinana, kilalao ary kaontenera ao an-trano.
Ny fangatahana famonoana otrikaretina sy fanadiovana mbola tsy nisy toa azy dia nahatonga ny fananganana milina famolahana famaohana mba hanisy savony, famonoana otrikaretina sy hidrôlôgy. Ny rafitra famolavolana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra dia lasa malaza eo amin'ny tsena. Mandritra ny vanim-potoanan'ny vinavina, ny tsenan'ny milina famolavolana kapoka dia antenaina hitombo amin'ny tahan'ny fitomboana antonony mitombo isan-taona eo amin'ny 4%. Noho izany, ny fanitarana tsy ampoizina ny teknolojia famolavolana extrusion antsoina hoe die expansion dia nanjary sakana tamin'ny famokarana plastika. Noho izany, ny orinasa dia tokony hanaiky fiviliana lehibe amin'ny refin'ny vokatra na fandeferana hialana amin'ny olana fanitarana bobongolo. Ny toetra mora vidy amin'ny teknolojia famolavolana extrusion dia nahatonga ny fangatahana milina famolavolana.
Tatitra fironana misimisy kokoa avy amin'ny Transparent Market Research - https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/stellar-22-cagr-set-to-propel-transparent-ceramics-market-forward-from-2019-to - 2027-tmr-804840555.html
Ny fetran'ny fikirakirana ny milina famolavolana kapoka sy ny fisian'ny safidy hafa manakana ny fitomboan'ny tsenan'ny milina famolavolana
Ny fidirana amin'ny tsena sy ny fampiroboroboana ny vokatra dia manome fotoana mety ho an'ny tsenan'ny milina famolavolana
Fangatahana fanadihadiana momba ny fiatraikany covid19 - https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=65039